Madaxwaynaha DDSI Oo Kahadlay Xaalada Deegaanka Iyo Qorshayaasha Sanadka Cusub Ee 2007-da T.I. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Kahadlay Xaalada Deegaanka Iyo Qorshayaasha Sanadka Cusub Ee 2007-da T.I.
Jigjiga(CN) talaado 02 Sep. 2014, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kawar bixiyay xaalada deegaanka Soomaalida Itoobiya uu haatan marayo iyo qorshaha sanadkan cusub ee 2007-da yoolasha la beegsanayo dhinaca horumarka iyo nabadgalyadaba.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud ayaa sheegay in xaalada nabadgalyada iyo horumarka deegaanku ay marayso halkii ugu saraysay abid dhanka nabadgalayada iyo horumarkaba, taasina ay ku timid iskaashiga maamulada heer deegaan, gobolada, degmooyinka ilaa heer tuulo iyo waxgaradka odoyaasha deegaanka, iyadoo matoorka ugu wayni ahaa rabitaanka iyo kalsoonida shacabka.
Mar aan wax kawaydiinay madaxwaynaha in ay jiraan dad aan ku qanacsanayn horumarka rasmiga ah iyo nabadgalyada deegaanka ee maanta ayuu ku jawaabay sida tan: "way jiraan shaqsiyaad xambaarsan fikirada dulsaarnimada iyo aragtida nabadiidka dal iyo dibadba waxayna taasi lamid tahay ururka UBBO oo isagu markasta sheega in uusan deegaanka kajirin wax horumar ah." Madaxwaynaha oo hadalkii siiwata ayaa tusaale u soo qaatay in malabka oo la ogsoonyahay inuu dawo yahay ay hadana jiraan dad malabka laftiisu cudur(alarjig) ku yahay. Balse waxaa naga go'aan ayuu yidhi madaxwaynuhu shaqo iyo xalka kaliya oo ah horumarka iyo danta shacabka.
Sidoo kale dhanka nabadgalyada deegaanka ayaan wax kawaydiinay madaxwaynaha wuxuuna sheegay in ay iska cadahay meesha laga soo qaaday iyo meesha ay maanta taagantahay iyadoo ay ku timid naf, maal iyo wakhti dheer oo loo huray si lahaansho iyo laxejeclo ahna loogu dadaalay, taasoo midhaheedii la intifaacsanayo neecow deediina lagu neefsanayo Ilaahayna lagu mahadinayo. Waana mida maanta lahadhsanyo ee aan ku faantamayno ayuu yidhi madaxwaynuhu.
Dhinaca kale Madaxwayne Cabdi Maxamuud ayaa kahadlay qorshaha sanadka cusub ee dhinacyada horumarka la bartilmaameedsanayo wuxuuna carabka ku dhuftay in laga duulayo cashir ahaan dhinacyadii adkaa ee sanadka lasoo dhaafay islamarkaana xooga lasaarayo horumarka aas aasiga ah oo ay ugu horeeyaan biyaha, buundooyinka, jidadka, caafimaadka, dib-u-dajinta iyo guud ahaanba yoolasha dalka iyo deegaankuba ay hiigsanayaan. Wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in targetku ka duulayo ilaa heer tuulo.
Madaxwaynaha ayaa intaas ku daray in sidoo kale la joogtaynayo nabadgalyada iyo xasiloonida deegaanka oo ah furaha horumarka taasina ay horseedi doonto balaadhinta maalgashiga deegaanka ee maalqabeenada u dahashay dalka iyo caalamkaba.